Warner Karl Heisenberg: akụkọ ndụ, usoro na ụkpụrụ ejighị n'aka | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka otu n’ime ndị ọkammụta sayensị gosipụtara akara tupu na mgbe na ụwa nke physics. Ọ bụ ihe Werner Karl Heisenberg kwuru. Ọ bụ onye na-eche echiche na ọkà mmụta sayensị nke sitere na German onye mepụtara ọrụ ụfọdụ dị oke mkpa n'ime ụwa nke piịnis physics. A maara ha nke ọma maka enweghị mgbagwoju anya ma ọ bụ ụkpụrụ indeterminacy nke wetaworo ọtụtụ ọganihu na physics.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara akụkọ ndụ Heisenberg na ihe ndị ọzọ.
1 Heisenberg biography
2 Heisenberg enweghị ụkpụrụ
3 Ọrụ Epsilon
4 Na-ezigara ụkpụrụ a na-ejighị n'aka
A mụrụ ọkà mmụta sayensị a na Würzburg na Disemba 5, 1901. Ebe ọ bụ na ọ dị obere, o tinyere aka na ụwa agụmakwụkwọ ebe nna ya bụ prọfesọ akụkọ ihe mere eme. Inwe onye nkuzi n'ime ezinụlọ mere ka Heisenberg nwee mmasị na ụwa sayensị. Ọ gụrụ akwụkwọ na Mahadum nke Munich wee bụrụ dọkịta na 1923. Ọzụzụ ya na ndị mmadụ dị mkpa sitere na ụwa nke physics dị ka Niels Bohr.
Na onye ọkà mmụta sayensị a na-arụ ọrụ dịka onye inyeaka site na onyinye sitere na Rockefeller Foundation. Ọ dịlarị na 1927 ka ọ mechara rụọ ọrụ dịka prọfesọ na Mahadum Leipzig. Ebe a na mahadum a ọ malitere izi oche nke usoro iwu physics. Dịka ọ bụ onye nkuzi na mahadum ahụ, ọ mụbakwara ọmụmụ ihe ya na nyocha iji nye ụfọdụ onyinye na ụwa sayensị.
Amaara m Albert Einstein na mmadụ mgbe ọ na-arụ ọrụ na Copenhagen Institute for Theoretical Physics. N'oge a ọ bara ụba na nyocha ya ma mepụta igwe na-arụ ọrụ matriks. Mgbe nyochachara dị iche iche, igwe na-arụ ọrụ na matrik ahụ dubara ya na nhazi nke usoro ọgụgụ isi.
Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, na 1935 ọ chọrọ ịbanye Mahadum nke Munich iji dochie Sommerfield. Nwoke a lara ezumike nká n’oge ahụ, mana ndị Nazi gbochiri nhọpụta ya. Ha rụtụrụ aka na Heisenberg na-arụ ọrụ na postulates nke bịara ndị Juu nyocha dịka Einstein na Niels Bohr. Otú ọ dị, ọtụtụ afọ mgbe nke ahụ gasịrị, ọ nakweere nkwupụta ndị Nazi iji duzie iwu nke bọmbụ atọm nke ọ na-elekọta dị ka onye ntụzi na ụlọ akwụkwọ Kaiser Wilhem. Ikekwe mbọ ole na ole iji mepụta igwe nrụpụta nuklia nke nwere ike iwepụta ngwa ngwa, mana amamịghe ya ezughi oke maka nke ahụ. Ya mere, ọ gaghị enwe ike iru ya.
Heisenberg enweghị ụkpụrụ
A maara nwoke a maka ụkpụrụ a na-ejighị n'aka nke sitere na nyocha dị iche iche. N'ime oge ọrụ gị dịka onye nyocha, ọtụtụ nyocha gị nwere ike iduga na nrụpụta ngwa agha nuklia, ọ bụ ezie na o meghị ya n’ihi ụkpụrụ omume. Nnyocha ya kachasị mkpa bụ nhazi nke ụkpụrụ a na-ejighị n'aka. Ndị ọkà mmụta sayensị ndị ọzọ ejirila ụkpụrụ a ruo taa.
Uncerkpụrụ a na-ejighị n'aka nke Heisenberg na-egosi na ọ gaghị ekwe omume ịmata oge na ọnọdụ nke atọm. Site na iguzobe akwụkwọ ozi ndị a, o mere ka ndị ọzọ nwee usoro metụtara ịdị ukwuu, oge na ike. Ke adianade do, enye ama ekeme ndikpụhọde ndusụk ukpepn̄kpọ eset oro ọkọnọde ke akpanikọ nte ke physics. N’iburu n’uche na atọm ndị mejupụtara ihe ndị ahụ na-eme ngagharị mgbe niile, ọ gaghị ekwe omume ịchọpụta ọnọdụ ha.
N'aka nke ọzọ, Heisenberg, dabere na ọkpụrụkpụ physics, nwere ike ịkọwa duality nke atom hydrogen atom na helium atom. Site n'ọmụmụ ihe ndị a, ọ nwetara Nrite Nobel na physics na 1932. Ọrụ ya bụ nnukwu onyinye na ndị na-agụ kpakpando ebe ọ buru amụma na ịdị adị nke hydrogen na steeti abụọ. Otu n’ime ha bụ orthohydrogen, nke ọzọ abụrụ parahydrogen. Ha abuo kwesiri ime dika ndi mmadu na -emeghari.
Mgbe agha ahụ biri, a tụrụ Heisenberg ya na ndị German ndị ọzọ ndị German mkpọrọ maka ugbo a na-akpọ Farm Hall na England. Ebumnuche ebumnuche kachasị mkpa bụ ịchọpụta etu ọrụ ọrụ nuklia si rụọ ọrụ. Mgbe bọmbụ Hiroshima gbawara, Heisenberg gwara ndị mkpọrọ ndị ọzọ okwu ihu ọha iji kọwaa ya kpọmkwem uranium a chọrọ iji mee bọmbụ dị otú ahụ.
Ebe ọ bụ na ha debere ọtụtụ igwe okwu zoro ezo n'ụlọ niile, a kwadoro na Heisenberg maara oke uranium ọ chọrọ iji mepụta ngwa agha nuklia mana na ọ chọghị ime ya n'ihi ụkpụrụ omume.
Na-ezigara ụkpụrụ a na-ejighị n'aka
Nwa nke ụkpụrụ a na-ejighị n'aka na-egosi na ka ọ dị oke nkenke anyị ji mara ọnọdụ nke urughuru ma ọ bụ obere nkenke anyị ga-amata ihe ọsọ ya bụ na ntụgharị. Ihe nchoputa nke onu agha a gha enwe mgbagwoju anya otutu oge site na nleba anya. Enwere ike itinye n'ọrụ a n'ọtụtụ sistemụ anụ ahụ mana ha agaghị enwe ike ịhụ anya na-enweghị ịgbanwe ha n'ezie. Ihe omuma atu nke a bu na Gaghị enwe ike ịtụle nrụgide dị na taya na-enweghị ịhapụ ikuku ọ bụla. Anyị agaghị ama kpọmkwem nrụgide nke taya ahụ tupu ịtinye ihe nhicha ahụ dị ọcha.
Uncerkpụrụ a na-ejighị n'aka nke Heisenberg mere ka o doo anya na ọ nweghị ihe jikọrọ ya na usoro nyocha. O kwuru na ikpebisi ike bụ nnukwu mbibi nke sistemu akụrụngwa niile ma a na-ahụ ya ma ọ bụ na ọ bụghị. Ma ọ bụ nsonazụ nke duality nke dị n'etiti ebili na mkpụrụ ahụ. Ọ bụrụ na ekwesịrị ịsị na ụkpụrụ a na-ejighị n'aka bụ otu n'ime usoro emezighị emezi n'ụzọ niile n'akụkọ ihe mere eme ebe ọ bụ na o chere na ọ pụtara na nkà ihe ọmụma. Ejiri ya ule nke nnwere onwe ime nhọrọ na dịka ule nke ohere akara aka. Ejiri ya maka ebumnuche telepathy ma ọ bụ parapsychology.
Isiokwu nke o mere ka a mata ụzọ nkà ihe ọmụma na-adịghị agbanwe agbanwe nke mmalite ya na 1927, kwuru ihe ndị a:
"Na usoro siri ike nke iwu kpatara" Ọ bụrụ na anyị maara nke ugbu a, anyị nwere ike ịkọ ọdịnihu, "ọ bụghị nkwubi okwu, kama ọ bụ amụma bụ ụgha. Anyị enweghị ike ịmara, maka ebumnuche nke ụkpụrụ, ugbu a na nkọwa ya niile.
N'ikpeazụ, Heisenberg nwụrụ na February 1976.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere nke a Heisenberg na uru ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Heisenberg biography